Xukuumadda Puntland oo ka hadashay u diyaar garowga Shirka Wadatashiga Madasha | SAHAN ONLINE
Xukuumadda Puntland oo ka hadashay u diyaar garowga Shirka Wadatashiga Madasha
GAROOWE – Golaha Xukuumadda Puntland ayaa maanta shirkoodii khamiis laha ahaa uga hadlay amniga,u diyaar garowga shirka Wadatashiga madasha maamulada xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya iyo xaaladda abaaraha.
Golaha Xukuumadda ayaa sheegay in ammaanka Puntland uu yahay mid wanaagsan isla markaana ciidamada amniga ay ku jiraan heegan.
Golaha ayaa isku raacay in loo diyaar garoobo qabsoomida shirka Wadatashiga madasha maamul goboleedyada Soomaaliya kaasoo horey loogu balamay in uu ka dhaco wajigiisa labaad caasimada Puntland ee Garoowe.
Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa horey uga wadahadlay ajendayaal muhiim u ah horumarinta Soomaaliya iyadoo la sheegay in ay sii amba qaadi doonaan ajendayaasha dhiman isla markaana ka wada xaajoon doonaan arrimaha amniga dalka iyo isku xirka maamulada Federaalka.
Sidoo kale shirka golaha Xukuumada Puntland ayaa looga hadlay qeylo dhaanta dhanka biyaha oo ka sii yaaranaya miyiga gobolada Puntland taasoo laga casbi qabo biyo la’aan daran.
Wuxuu sidoo kale golohu u sheegeen Wasaaradda Caddaaladda in ay bilowdo roob doon ALLAAH looga baryayo,wuxuuna Madaxweynuhu faray Wasaaradihii iyo guddiyadii ka shaqeyn jiray u gurmadka dadka iney bilaabaan qorshaha looga hortagayo xaaladdan.
Ugu dambeyn ,Golaha Xukuumadda Puntland warbixin ka dhegaystay wasaaradda caafimaadka Puntland oo safar shaqo ku tagtay dalka dibaddiisa waxa ayna wasaaradda sheegtay in dhawaan bilaawi doonto dhisme xarumo caaafimaad.